नेपाल आज | ८ अर्ब खर्च गरेर छोरीको विवाह, मन्त्र पढ्न मात्रै बोलाइयो ५ सय पण्डित!
८ अर्ब खर्च गरेर छोरीको विवाह, मन्त्र पढ्न मात्रै बोलाइयो ५ सय पण्डित!
छोरीको विवाहमा नेताजीले पानी झैँ गरी पैसा बगाउँदैछन् ।मन्त्रीकी छोरीको बिहे हैदरावादका एकजना उद्योगपतिसँग हुन लागेको हो। ५ तारिखमा हुने विवाहको पूजाआजा तथा भोजभतेर फेब्रुअरी २७ देखि नै सुरु भईसकेको थियो । ९ दिनसम्म चल्ने उक्त समारोह भारतमा यो दशककै सबैभन्दा महंगो विवाह भएको बताईएको छ ।